यी राशि हुनेहरु यो साता हुँदैछन् माला(माल? पौष १८ गतेदेखि २४ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस् « Gaunbeshi
यी राशि हुनेहरु यो साता हुँदैछन् माला(माल? पौष १८ गतेदेखि २४ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस्
मेष राशिस् यो साता तपाईको उत्तम रहेको छ । पारिवारिक अवस्था सुखमय हुनेछ । व्यापार व्यवसाय सुधार आउला । आय आर्जनमा वृद्धि हुनेछ । श त्रु हरु मित्र बनेर सहयोगी बत्रेछन् । सन्तान सहयोग पाइने छ । अध्ययन अध्यापनमा सफलता पूर्वक सम्पन्न हुनेछ । पुराना साथी भेट हुने तथा नयाँ साथी बन्ने सम्भावना देखिन्छ । प्रयत्न गर्दा अप्ठ्यारा काम पनि सम्पादन हुन सक्छन् । ई र्ष्या गर्नेहरूको मनोबल कमजोर हुनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्ने समय छ ।
वृष राशिस् दाजुभाइको सहयोग पाइनेछ । सामाजिक प्रतिष्ठा, नेतृत्व शक्तिमा वृद्धि हुनेछ । अध्ययन अध्यापन तथा आय आर्जन सामान्य रहनेछ । मान(सिक चिन्ता हट्नेछ । धार्मिक कार्य गर्ने अवसर मिल्नेछ । तीर्थस्थलको यात्रा गर्ने योग छ । स्वास्थ्यमा देखिएको कमजोरीले काम प्रभावित बन्नेछ। लगनशीलताले मात्र परिस्थिति सहज बन्न सक्छ।
मिथुन राशिस् शारी(रिक परिश्रम बढ्नेछ । दैनिक कार्यमा ढिला सुस्ती र उ ल्झ न व्यहोर्नु पर्ला । आय आर्जन सन्तोषजनक देखिदैन । अचल सम्पत्तिको क्ष य हुने देखिन्छ । कुनै नयाँ प्रगति हुने देखिदैन । वाणीको प्रभाव बढ्नाले श त्रु पनि वशमा पर्नेछन् । अरूका विषयमा चासो लिँदा व्यर्थैमा झमेला बेहोर्नुपर्ला। पहिलेका निर्णयले काममा चुनौती निम्त्याउने देखिन्छ।
कर्कट राशिस् पारिवारिक सद्भाव बढ्ने छ । पति पत्नीबीचको माया सुमधूर बन्नेछ । स्वास्थ्यमा सुधार आउने छ । मानसिक स्फूर्ति बढ्नेछ । वैदेशिक व्यापारमा लाभ मिल्ला । भूमि तथा वाहनको सुख प्राप्त हुनेछ । अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ । प्रशस्त धन आर्जन गर्ने मौका छ। पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदाको योग छ।
सिंह राशिस् मानसिक चिन्ता बढ्नेछ । अनावश्यक विवाद होला । वैदेशिक यात्राको योग छ । आँखाको समस्याले सताउला । व्यापार व्यवसायमा अवरोध सिर्जना हुने देखिन्छ । काममा स्थिरता रहनेछैन । रोजगारीका लागि परिश्रम गर्नु पर्ला । आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुन सक्छ। बोलीको गलत अर्थ लाग्नाले विवाद बढ्ने सम्भावना छ। सहयोगीहरूले त्यत्ति साथ नदेलान् ।
कन्या राशिस् अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढ्नेछ । लेखनकार्यबाट प्रसस्त मान सम्मान पाइएला । आय आर्जनमा वृद्धि हुने छ । धन प्राप्त हुने देखिन्छ । माङ्गलिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । खर्चिलो यात्रा गर्नु पर्ला । सन्तानको सहयोग प्राप्त हुनेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ। अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। विगतका कमीकमजोरीलाई पनि सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
तुला राशिस् सामाजिक पद प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । अचल सम्पत्तिको व्यापारमा प्रसस्त लाभ हुने देखिन्छ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । जागिरमा पदोन्नति हुने योग छ । मान(सिक च ञ्च लता र अशान्ति बढ्नेछ । अध्ययन अध्यापन अवरोध आउनेछ । आफ्नाबाटै टाढिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । अवसरका लागि निकै दौड धुप गर्नुपर्ला। समयमा होस नपुग्नाले व्यवहारमा पछि परिएला । साथीभाइको सहयोग जुट्नाले दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउन सकिनेछ। अचल सम्पत्तिको उपयोगबाट थप लाभ हुन सक्छ।
वृश्चिक राशिस् धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । सामाजिक प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । साथीभाइको सहयोग प्रसस्त पाइएला । आकस्मिक धनको क्षति हुनेछ । तीर्थस्थलको यात्रा होला । साहित्यिक सभा सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । परीक्षा तथा अन्तर्वार्तामा सफलता मिल्नेछ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ।
धनु राशिस् स्वास्थ्यमा समस्या सुधार आउने छ । अनावश्यक तथा खर्चिलो यात्रा गर्नु पर्ला । आफन्त,साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ । न्यायिक कार्य सामान्य नै रहने छ । व्यापार व्यवसायमा उन्नति होला । मान(सिक चिन्ता हराएर जानेछ भने कान्ति आउने देखिन्छ । अध्ययन अध्यापनमा सुधार आउने छ । विविध चुनौती सामना गर्नुपर्दा दि क्दा री बढ्न सक्छ। बाध्यतामा अलमलिनुपर्दा मन खि न्न रहनेछ । साताको अन्त्यमा लामो यात्राको योग छ ।
मकर राशिस् प्रेम कायम होला । पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ । व्यवसायिक साझेदारी बढ्नेछ । व्यापारमा प्रसस्त लाभ मिल्ने देखिन्छ । राजनैतिक कार्यमा आकर्षण बढ्नेछ । अध्ययनका लागि धैर्यता लिनु पर्ला । शत्रुहरु परास्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ । रहस्य पत्ता लाग्नेछन् भने नसोचेको धन लाभ हुन सक्छ। तापनि, सानातिना समस्याले अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ।
कुम्भ राशिस् आय आर्जनमा सुधार आउला । अध्ययन अध्यापनमा अवरोधको सामना गर्नु पर्ला । राजनैतिक अपजशको सामना गर्नु पर्ला । स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । वैदेशिक यात्रामा अल्झन आउने देखिन्छ । मनमा शं का र नकारात्मक सोचाइ बढ्न सक्छ । कामको चा प र थ का इबाट मुक्त रही विश्राम पाइनेछ। आयआर्जन पनि राम्रै हुनेछ। अतिथिका रूपमा सम्मान पाइने समय छ। रमाइलो यात्राको समेत मौका छ।
मीन राशिस् पठन पाठन तथा आय आर्जन प्रसस्त हुने देखिन्छ । घरमा माङ्गलिक कार्य होलान् । सभा सम्मेलनमा सहभागिताको अवसर मिल्नेछ । पेटको समस्या देखिन सक्छ । समाजमा यश कीर्ति बढ्ने छ । यात्राबाट लाभ मिल्नेछ । सन्तानबाट सहयोग पाइनेछ । पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ । व्यवसायिक साझेदारी बढ्नेछ । व्यापारमा प्रसस्त लाभ मिल्ने देखिन्छ । राजनैतिक कार्यमा आकर्षण बढ्नेछ ।